GO'AANNO MUHIIM ah oo ay qaateen Soomaalida ku nool waddaanka...! - Caasimada Online
Home Warar GO’AANNO MUHIIM ah oo ay qaateen Soomaalida ku nool waddaanka…!
GO’AANNO MUHIIM ah oo ay qaateen Soomaalida ku nool waddaanka…!
San’a (Caasimada Online) Soomaalida ku nool dalka Yemen ayaa codsaday in dib loogu celiyo dalkooda kaddib markii xaalad nolol xumo ay ku heesato dalkaas.
Wariyaha VOA ee Yemen, Jacfar Kuukaay ayaa soo sheegay in Soomaali badan oo ku nool Yemen ay buux dhaafiyeen xarunta UNHCR ee dalka Yemen, iyagoona codsanaya in dib loogu celiyo dalkooda.
Laakin wariyaha ayaa sheegay in aysan jirin cid dhageesaneysa codsiga Soomaalida ee raba in dib loogu celiyo waddanka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay oo kale in qoxootiga Soomaalida ee ku nool Yemen in ay halkaas ku heesato daruufo adag oo ah xagga nolasha, dumarka qaar kood waa ay tuugsadaan,kuwana waxa ay ka shaqeeyaan guryaha cararabta.
Dhallinyarada waxa ay dhaqaan baabuurta kuwa kalena waxa ay ka shaqeeyaan maqaayadaha Yemen.
Wariyaha ayaa sheegay in xafiiska UNHCR ee Yemen uu diidday xilligan in qoxootiga Soomaalida dib loogu celiyo dalkooda, waayo weli meelaha qaar waxa ay u aqoonsan yihiin goobo ay ka socdaan dagaallo, marka wuxuu lee yahay waa laga war sugaa xafiiska UNHCR ee Genava.